Nzira yekusarudza nekuchengetedza sofa kana uine katsi | Noti Katsi
Tese isu tinogara nekatsi imwe (kana kupfuura) tinofanirwa kubata maviri, ngatidanei, madiki matambudziko: vhudzi uye kukwenya. Kune rimwe divi, kana mhuka iine bvudzi pfupi, mvere dzayo dzakaiswa mumucheka wesofa uye zvinoita sekunge panofanirwa kunge pasina nzira yemunhu yekuibvisa, uye kana iri refu inogona kusiya huwandu hwakakosha hwehuswa mumwedzi yekuwedzera kupisa.
Kune rimwe divi, nzara dzavanadzo dzinogona kuparadza fanicha. Neraki, zvichienderana nemabatiro atinoita pasofa, iro dambudziko diki harichazove rakaomarara kubvisa. Naizvozvo, isu tichaenda kukutsanangurira nzira yekusarudza yakanakisa pasofa kana uine katsi, uye kuti ungachengeta sei sezuva rekutanga.
1 Nzira yekusarudza yakanakisa pasofa?
2 Matipi kuitira kuti kati yako isasiya "mucherechedzo"
2.1 Chengeta vhudzi rake
2.2 Ipa chinotsvaira
3 Nzira yekuchengeta sei sofa iri mune yakanaka mamiriro?
4 Mazano ekuti sofa rako rive rakakwana
4.1 Cat jira
4.2 Ruvara rwakakodzera
4.3 Hapana makona akapinza
4.4 Hapana chine makumbo emapuranga
4.5 Yakasimba uye inokwanisika
Nzira yekusarudza yakanakisa pasofa?
Paunogara nekamwe katsi uye iwe uine chaunoda kutenga masofa akasimudzwa, unofanirwa kusarudza iyo ine yakanaka upholstery asi zvakare seisingagone sezvinobvira. Ngatione zvakanakira nekusagadzikana kwerudzi rumwe nerumwe:
Cuero: ine mutengo wakakwira, asi zviri nyore kwazvo kuchenesa nekungopukuta pakaoma.
Screen: inodhura uye kune akasiyana akasiyana mavara, asi vhudzi rakabatanidzwa zviri nyore kwazvo.
Zvisinei nemhando yeupholstery yakasarudzwa, tinogona kuita kuti sofa igare yakachengeteka nejira rinokodzera katsi. Pane maviri akasiyana mamodheru:
Fouscurit: imucheka wakaomeswa uyo unogona kushandiswa kuvhara mhando dzese dzemidziyo. Inodzosera mavara uye inogona kucheneswa nejira, nokudaro ichibvisa vhudzi. Chinhu chisina kunaka chete ndechekuti haidziviriri padandemutande.
Courtisane: inoderera zvishoma pane yekutanga, asi inodzosera mavara. Kune vamwe vane Teflon. Inonyanya kusununguka kupfuura iyo Fouscurit.
Mune imwe yevaviri, muchiitiko chekuti kati yakafunga kuikwenya, yaisazoonekwa yakawanda. Ehe, zvakakosha kuti isatswe, saka ngatione zvatingaite kuti zvisadaro.
Matipi kuitira kuti kati yako isasiya "mucherechedzo"
Iyo katsi ... ndizvo zvazviri. Iine vhudzi uye nzwara, uye isu tinofanirwa kuchida sezvazviri. Asi isu tinogona kuita zvinhu zvakawanda kudzivirira fanicha yedu kuti isagume yaparadzwa nguva isati yakwana, uye hachisi chinhu kunze kwekupa mhuka nezvazvinoda, ndokuti:
Chengeta vhudzi rake
Kunyangwe ipfupi kana refu, mazuva ese iwe unofanirwa kukwesha kamwe chete. Munguva yekudonhedza mwaka, inofanira kuitwa 2-3 nguva kuitira kudzikisira njodzi yemabvudzi emabvudzi inogadzira zvakanyanya sezvinobvira. Uye zvakare, zvakakosha kuti uipe chikafu chemhando yepamusoro, icho chisina zviyo kana ne-zvigadzirwa, sezvo izvi zvichizove nechokwadi chekuti ine jasi rine hutano, rakasimba uye rinopenya.
Zuva rega rega zvinoitwa nemurume mukuru ndeye kurodza nzara dzayo. Uye izvi zvichazviita pamasofa, pamakumbo ezvigaro, kana chero imwe nzvimbo isingadiwe kunze kwekunge isu tenga imwe (kana kupfuura) vanokwenya. Izvi Vanofanira kuiswa mumakamuri umo mhuri inoita hupenyu hwakawanda, sezvo dzichava nzvimbo idzo feline inoshandisa yakawanda nguva.
Nzira yekuchengeta sei sofa iri mune yakanaka mamiriro?
Pamusoro pezvese zvatakurukura kusvika pari zvino, zvakakoshawo kuti utarise midziyo yatichangotenga nepose patinogona napo kuti igare kwemakore mazhinji. Saka, nguva nenguva, ndoda kamwe pazuva kana rimwe zuva, tsvina inoda kubviswa kuti isu tingave takasiya. Kune izvi tinogona kushandisa duster kana, kunyangwe zvirinani, yekuchenesa
Mwedzi wega wega Isu tichabvisa -kana zvichibvira- jira resofa uye ticharisuka. Izvi zvinonyanya kudikanwa kana paine mumwe munhu ane allergiki kune feline bvudzi kana dander sezvo zvisaririra zvekati bvudzi zvinogona kukuvadza zviratidzo zvavo; uye zvakare munguva yekuchinja.
Mazano ekuti sofa rako rive rakakwana
Pazasi uye tichifunga zvese zvakataurwa pamusoro apa, tinoda kukupa mamwe matipi kuti sofa rako rive rakanakira mhuri yako, zvakare uchifunga nhengo dzemukadzi wako. Kunyange katsi dzichigona kuzvimiririra, hazvireve kuti dzakashata kana kuti dzinofarira kuita zvakaipa, vanongotorwa moyo nehunhu hwavo, sekukwasva nzara dzavo pasofa raunofarira kana cheya cheya.
Katsi diki dzinoda kukwenya nekutamba, uye hadziwanzo dziita kune kititi marara ... dzimwe nguva vanoona zvichinakidza kuzvisunungura pacushion yakasununguka pasofa rako. Nekuda kweizvozvo, midziyo yemumba inowanzo kanganisika. Kune izvi zvese, isu tiri kuzokupa makiyi kuitira kuti kana iwe ukatenga sofa kana armchair, urikutenga iyo yakanyatso kukwana kune wese ari mumba mako.
Kune mamwe machira emidziyo akanakira zvakanyanya kune dzimba dzine kitsi. Kutamba, kukwenya, kudurura uye tsaona diki dzinogona kutora mubhadharo wavo pazvigaro nemasofa, saka zvakanakisa kusarudza zvinhu zvine micheka yemachira yakasimba.
Fenicha yakavharwa nemicheka ye microfiber inowanzo kuve yakasimba uye iri nyore kuchenesa. Sarudza zvigadzirwa zvisingagadzirisike pese pazvinogoneka. Leather uye dzimwe nzira dzakagadzirwa dzakareruka kuchenesa mushure mekunge tsaona dzaitika, asi hadzi simuke kune zvinokandwa uye zvigunwe zvemaoko ako madiki nezvipikiri zvakapinza.
Chinhu chakakosha kuve nemucheka unodzivirirwa pamasofa nemacheya anochengetedza machira kubva kumatota uye zvinonetsa kuti mabacteria apfuure nepakati ... izvi zvakanaka nekuti kana zvakuvara zvakanyanya, zvinowanzove nemutengo unogamuchirwa uye unogona tenga imwe kuti uchinje iyo iwe katsi yatoshata. Hazvina kufanana kutenga jira rekudzivirira pane iro rese pasofa!
Zvisinei nekuedza kwako kwese, katsi yako ichagara iine tsaona diki. Kwete izvozvo chete, makumbo akasviba ndechimwe chechokwadi chehupenyu icho varidzi vese vekatsi vanofanirwa kubata nacho, uye kana zvese zvisina kukwana, mvere dzinodonha dzinogona kuoneka zvakanyanya mune mamwe marongero eruvara.
Funga nezve izvi zvese zvinhu kana uchisarudza iyo vara remidziyo yako. Mavara nehuswa zvichave zvakakurisa sei pazvinhu zvauri kutarisa? Kutenga zvigaro zvakafananidzwa uye masofa kazhinji inzira yakanaka yekuvanza matambudziko aya.
Hapana makona akapinza
Katsi dzinoda kutamba uye kuongorora uye dzinogona kunge dzichinetsa pane dzimwe nguva. Izvi zvinoreva kuti midziyo iri mumba mako inogona kuve nenjodzi kana ukasasarudza zvine hungwaru. Tarisa zvinhu zvine akakomberedzwa kana akapeteredzwa mativi nemakona. Ehezve, pachave nenguva apo chidimbu chemidziyo chinopa njodzi. Ita shuwa yekumisikidza zvinhu izvi nenzira inoderedza mikana yetsaona dzakashata.
Hapana chine makumbo emapuranga
Makati zvisikwa zvakasikwa. Dzakawanda dzepamoyo dzinovabatsira kurarama musango dziripo mukitsi dzemumba dzanhasi. Imwe yeaya maitiro ndeekurodza nzwara dzako. Katsi dzinoda kuchera nzara dzadzo diki muzvigaro zvematanda nemakumbo etafura. Vanoita izvi kuti varambe vakapinza, asi zvakare kuvachengeta vakachena uye vasina hutachiona.
Kana katsi yako isina chairo yekukwevera mumba, fanicha yako haizove imwe nzira inokwezva. Katsi yako inogona kuona yako fanicha sechinhu chinokwezva chinorodza kana pasina chinokwenya mumba. Tenga imwe woiisa padyo nemubhedha wekati yako.
Zvisinei, haisi makumbo chete ari panjodzi. Chero mhando yemidziyo yemapuranga chishandiso chinogona kurodza nzwara dzekati. Funga nezve kwaunozoisa zvinhu izvi kana zviri mumba mako. Viga zvinhu zvematanda pazvinogoneka uye zvibvunze kuti: Pane nzira here yekutadzisa kupinda kune fanicha yemapuranga?
Yakasimba uye inokwanisika
Katsi dzinogona kuda kuziva uye nekukurumidza, kunyanya kana dzichiri diki. Ivo vachatamba nefenicha yako uye vokonzera kumwe kukuvara. Iwe unotofanira kungozvikurira. Usatenge fenicha isina kusimba kana isina kusimba, uye usashandise mari yakawandaZvikasadaro, iwe uchagara uchinetseka nezvekukuvara uye kuputsa.
Katsi dzinogona kuomarara pamidziyo yemumba. Ita kuti hupenyu hwako huve nyore nekusarudza izvo zvakanaka zvinhu zvakagadzirwa nezvinhu zvakakodzera kwazvo. Tora nguva yekusarudza macheya, masofa uye fenicha yemazuva ese inoenderana nehupenyu nekitsi, uye iwe unozozviponesa wega kunetseka uye kunetseka.
Tinovimba matipi aya anobatsira kwauri ? .
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Curiosities » Maitiro ekusarudza uye chengetedza sofa kana uine katsi
Mboro yangu haikurumidze kunyura asi inokwira ichirovera nzara dzake. Izvozvi zvawave nezvipikiri unozviburitsa nguva dzese, unofanirwa kuzvicheka here?
Hongu, unogona kuvacheka, asi ndinokurudzira zvikuru kuti "umudzidzise" kwaanogona kukwenya uye kwaasingakwanise, sezvo katsi dzichida nzara dzadzo kukwira, kunhonga zvinhu, zvichingodaro. Pano isu tinotsanangura kuti tingamudzidzisa sei kushandisa yakakwenya, uye pano kwete kukwenya.
Kana uine chero mibvunzo, bvunza 🙂.